Zintoni izinto ezifihliweyo zeGmail? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 368
Ngamanye amaxesha siziva njalo Sichitha iiyure ezininzi sijonga imeyile kunye nokuya kwi-inbox oku kwenzeka ngamanye amaqonga kwaye mhlawumbi ngeGmail. Nangona kunjalo, uGoogle wenze ukuba abasebenzisi bafumane okuninzi kwiGmail yabo ngezixhobo zokuphelisa imisebenzi ephindaphindwayo.
Yeyiphi imisebenzi efihliweyo yeGmail.
Thumela ii-imeyile zakho "ukulala": Lo msebenzi ukuvumela ukuba ukhethe ii-imeyile kwaye emva koko ususe ibhokisi lokungenayo ukuseta nomhla omtsha, oko kukuthi, ibhokisi yebhokisi engenayo iya kuvela ngexesha elibonisiweyo. Ukwenza oku kufuneka usebenzise isixhobo "Snooze" okanye "Snuza".
UkuzikhumbuzaI-Gmail ibeka ii-imeyile ngaphezulu kwebhokisi engenayo ngokuzenzekelayo kwimeko yokungabinakho ukulandelelwa kangangeentsuku ezininzi.
Hlela umcimbi ngeKhalenda kwiGmailIkhalenda sisicelo sikaGoogle, esikwicala lasekunene leGmail kwaye ikuvumela ukuba ucwangcise umcimbi okanye ukhethe isikhumbuzi.
Umbutho onenkcukacha: Sebenzisa iilebheli kunye neefilitha eziza kukuvumela ukuba uququzelele ii-imeyile eziza zivela kumamkeli othile okanye ezikhankanywe ngegama elithile, oku kuya kwenziwa ngokuzenzekelayo.
I-Gmail iqikelela into oza kuyichwethezaI-Gmail inezinto ezimbini ezikukuvumela ukuba ugqibezele izivakalisi kwaye unike iimpendulo zemiyalezo engenayo. Ukwenza oku kuya kufuneka usebenzise i- "Smart Reply" okanye "Smart Compose", imisebenzi ekongela amawaka kunye neebhiliyoni zabalinganiswa ezingabhalwanga.
Iidilesi ezininzi ze-imeyileKwimeko apho ufuna ukuba nayo nayiphi na inguqulelo kwidilesi yakho, yongeza ixesha lokugqibela kwidilesi ye-imeyile. Umzekelo: [imeyile ikhuselwe] ntoni [imeyile ikhuselwe]. O [imeyile ikhuselwe] okanye nakuphi na ukwahluka, oko uGoogle athumele ii-imeyile ezifanayo.
Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo: Ikuvumela ukuba ugcine ixesha kunye nokufikelela ngqo, ukufumana ibhokisi ephumayo kufuneka ucinezele? kwaye olu luhlu lulandelayo luya kuvela:
Ctrl + Ngena kuthetha ukuthumela umyalezo.
I-Ctrl + Shift + b kuthetha ukongeza abamkeli beBcc.
Ctrl + Shift + c kuthetha ukongeza abafumana i-cc.
Ctrl +. kuthetha ukuqhubela phambili kwiwindow elandelayo.
Iindlela ezimfutshane ezihamba phambiliInomsebenzi weendlela ezimfutshane ezizezakho kwaye ziyahluka xa uvula iwindow entsha yokuqamba ude uhambise incoko enkunkumeni.
Ukwenza useto oluphambili kuya kufuneka uhambe:
Itshathi yezicwangciso kwikona ephezulu ngasekunene.
Uluhlu lwezicwangciso eziphambili:
/: Beka ikhesa kwibhokisi yokukhangela
c: qamba umyalezo omtsha
d: qamba umyalezo kwithebhu entsha
Gcina imiyalezo yakhoUkuba ufuna ukwenza ukhuphelo lwemiyalezo yakho, kufuneka wenze umrhumo kwiakhawunti ye-imeyile eyenza ikopi yogcino kwaye uyiqwalasele kwiakhawunti yakho ye-Gmail, ukuze ndithumele ii-imeyile kwibhokisi engenayo ephambili.
Kugqithiselwe phambili y,
Emva koko thumela kwakhona ikopi yeposi engenayo.
Bhala idilesi yeposi.
1 Yeyiphi imisebenzi efihliweyo yeGmail.
2 Ukwenza useto oluphambili kuya kufuneka uhambe:
3 Uluhlu lwezicwangciso eziphambili:
4 Yenza oku kulandelayo: